Kubhururuka, uyu ndiwo musoro weApple chiziviso chitsva cheApple Watch | Ndinobva mac
Inoda kuziva chiziviso chitsva cheApple kujekesa chinobatika nharembozha yedhiyo. Ichokwadi kuti iyo Cupertino kambani yave neanoshanda maseru ekubatanidza muApple Watch kwenguva yakareba mu Series 3 mamodheru, asi iri kutanga neiyo Series 4 modhi painoburitswa kune dzakawanda nyika dziri kunze kweUnited States.
Mune ino kesi, icho chakasarudzika kushambadzira umo isu patinogona kuona kana intuit rusununguko urwo iyo Series 4 wachi inotipa isu neinobatanidza nhare. Icho chiziviso che ingori pamusoro peminiti kureba uye mairi zvirokwazvo anopfuura mumwe wenyu anonzwa rudzi urwu rwepirouette nekuda kwemutambo wemhepo tunnel.
Mune ino kesi chokwadi ndechekuti ini ndinofarira kushambadza nekuti iri nyore asi yakanangana panguva imwe chete, Apple kazhinji inogadzira shambadziro dzakanaka uye iyi iri. Aya ndiwo maitiro ayo Chiziviso cheApple chine Apple Watch Series 4 seye protagonist:
Kunze kwerusununguko rwekuva nekubatana nharembozha muwachi, kushambadza uku kunoratidzawo kugona kwemvura kwechigadzirwa icho mune izvi kesi vanoti inosvika pamamita makumi mashanu. Ichokwadi ndechekuti Apple Watch Series 4 iwadhi huru muzvinhu zvakawanda uye inovandudza zvakanyanya mavhezheni apfuura, asi kuve nekubatana kana kusabatika nharembozha uye kushandisa iwo ma100 euros chimwe chinhu chiri chaicho kune wega mushandisi uye zvinoenderana nezvakawanda kunamira sei iwe unogona kuve neiyo iPhone masikati.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Kubhururuka, uyu ndiwo musoro weApple chiziviso chitsva cheApple Watch